Monday April 03, 2017 - 08:30:35 in Wararka by Super Admin
Saxafiga American-ka ah ee fadhigiisu yahay dalka Syria ee la yiraahdo Bilaal Cabdul Kariim ayaa sheegay in uu gudbistay dacwad ka dhan ah Maamulka Trump oo uu sheegay in rag uu isaga ka mid yahay lagu daray liiska waxa loogu yeero "Dadka loo ra
Saxafiga American-ka ah ee fadhigiisu yahay dalka Syria ee la yiraahdo Bilaal Cabdul Kariim ayaa sheegay in uu gudbistay dacwad ka dhan ah Maamulka Trump oo uu sheegay in rag uu isaga ka mid yahay lagu daray liiska waxa loogu yeero "Dadka loo raadinayo in la dilo" Isagoona tilmaamay in saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ay ku lug leeyihiin arinkaas iyagoo hadafkooda uu yahay in laga hor istaago taageerada uu siinayo shacabka Suuriya ee la tacaalaya sidii ay isaga horleexin lahaayeen Nidaamka dhiigyacabka ah ee Bishaar Al-asad madaxda ka yahay.
Dacwadan waxaa si wada jir ah u gudbiyey Bilaal iyo Sidoo kale Wariyaha caanka ah ee la yiraahdo Axmed Zeydaan oo ahaa madaxii TV-ga Al-Jazeera ee Xafiiska Islamabad wadanka Pakistan, Labadan wariye ayaa sheegay in dhowr jeer ay ka bad-baadeen weeraro la doonayey in lagu khaarijiyo oo ay fuliyeen diyaaradaha duuliye la’aanta ah ee Mareykanka, iyagoona tilmaamay in ay ku jiraan liiska dadka loo raadinayo in la dilo.
Dacwadda ay gudbiyeen labadan saxafi ayaa dowlada Mareykanka ku eedeyneysa in ay isticmaaleyso macluumaad uu soo uruuriyey barnaamijka dabagalka ee la yiraahdo SKYNET ee loo adeegsado hagitaanka diyaaradaha duuliye la’aanta ee lagu ugaarsado dadka lala xiriiriyo tuhunada argigixisada.
Clive Stafford Smith Oo ah, agaasimaha hay’adda lagu magacaabo "Bad-baadinta” oo fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska ayaa xaqiijiyey arintan, Wuxuuna wareysi uu siiyey TV-ga AlJazeera ku sheegay in ay og yihiin in labadan nin ay ku jiraan liiska dadka loo raadinayo in la dilo "Haa waxaan ognahay oo aan hubnaa in raggan lagu hayo dabagal ah oo ay ku jiraan liiska dadka la doon-doonayo” ayuu yiri.
"Marka aad eegto Axmed Zeydaan oo kale, wax shaki kuma jiro in uu ku jiro Liiska argagixsada, Waxaan heynaa Documents-yo ay iyagu leeyihiin oo la soo xaday oo ay sheegayaan in uu ku jiro liiska” ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sidoo kale yiri "Qadiyadda Bilaal waxay ka xoog badan tahay arrintan, isaga waxaanba ognahay in uu ka bad-baaday dhowr duqeyn oo hadafka uu isagu ahaa.
Bilaal ayaa qudhiisa sheegay in ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ay u xaqiijiyeen in liiska dadka la beegsanayo uu ugu jiro diyaaradaha Drones-ka Mareykanka ee ka soo kicitama saldhigga dhanka hawada ee Injarliik ee ku yaalla koonfurta dalka Turkiga., Saldhigga Injarliik waa saldhig ay leeyihiin ciidamada Turkiga balse ay adeegsadaan diyaaradaha Mareykanka ee duqeymaha ka dhanka ah Muslimiinta ka wada dalka Suuriya.
Bilaal Cabdul Kariim ayaa sidoo kale sheegay in ugu yaraan shan mar uu ka bad-baaday duqeymo la doonayey in lagu khaarijiyo oo ay fuliyeen diyaaradaha Drones-ka ee Mareykanka, isagoona tilmaamay in tan iyo sanadkii la soo dhaafayba uu ahaa hadaf ay si gaar ah u raadsanayeen sirdoonada Mareykanka si loo dilo.
Wuxuu Sheegay in sanadkii la soo dhaafay ee 2016-ka uu ka bad-baadya laba duqeyn oo Drone ah oo lagula beegsaday magaalada Idlib, kuwaas oo mid ka mid ah lagu beegsaday xafiiskooda magaalada.
Wuxuu sidoo kale sheegay in isla sanadkaas uu ka bad-baaday duqeyn lagu beegsaday gaarigiisa oo ka dhacday mandiqad lagu magacaabo Xariyataan oo ka tirsan gobalka Xalab.
Wuxuu sidoo kale sheegay in sanadkii la soo dhaafay lagu bartilmaameedsaday weerar Drone ah xilli uu joogay magaalada Khan-dhuumaan, Meel u dhow Kuliyadda Madficiyada ee magaalada Xalab ayuu sidoo kale sheegay in lagu weeraray isaga iyo kooxdiisa sanadkii la soo dhaafay.
Dhammaan shantaas weerar wuxuu sheegay in ay fuliyeen diyaaradaha duuliye la’aanta ah ee Mareykanka balse uusan isaga xilligaas ka qaadin wax shaki maadama duqeymuhu ay ahaayeen kuwa indha la’aan ah, Islamarkaana ay isbarbar socdeen duqeymaha Ruushka iyo kuwa Mareykanka oo ay sii dheertahay tan Nidaamka Nuseyriga ah ee Bashaar Al-Asad.
Ilaa hadda ma jirto wax war ah oo hay’adaha sirdoonka ee Mareykanka sida CIA-da iyo NSA ay ka bixiyeen eedeymahan balse Saraakiil American ah oo la hadlay Wargeyska New York Times ayaa shaki geliyey in arinkaas uu jiro, waxayna sheegeen in aysan xaqiijin Karin, sidoo kalena beenin Karin jiritaanka warkaas.
Wariye Bilaal Cabdi Kariim wuxuu lixdii sano ee ugu dambeysay ka mid ahaa Wariyeyaasha fara ku tiriska ah ee tooska ah u garab istaagay shacabka muslimiinta ah ee reer Suuriya intii lagu gudajiray kacdoonkii ay isaga caabinayeen Nidaamka Al-Asad, Waxaana sidoo kale uu ahaa saxafiyiinta safka hore kaga jiray ragga firfircoon ee garab taagnaa kacdoonka Suuriya tan iyo 2011-kii.
Wuxuu sidoo kale badanaa soo bandhigaa xasuuqqa iyo gabood fallada Nidaamka Al-Asad iyo duqeymaha Ruushka iyo Mareykanka ee ka dhanka ah Muslimiinta.
Bishii la soo dhaafay wuxuu soo bandhigay caddeymo maqal iyo muuqaal ah oo muujinayey duqeyntii diyaaradaha Mareykanka ay ka geysteen Masjidka Cumar Ibnu Khadhaab ee magaalada Al-jiina ee gobalka Xalab, xilli wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ay dafireysay xasuuqaasi, kuna tilmaameysay mid lagu beegsaday dhisme u dhow masjidka oo ay ku jireen Saraakiil ka tirsan Al-Qaacida.
Bilaal oo xilligaas booqday goobta ay duqeyntu ka dhacday ayaa sheegay in duqeyntu ay ka dhacday Masjidka, lagu dilay dad u badnaa xerta Jamaacada Tabliiqa oo badanaa Masjidka Laazimi jirtay, Isagoo sidoo kalena soo bandhigay dhismaha burburay ee Masjidka oo ay ka muuqatay raadadka gantaaladii lagu dhuftay.